News Collection: इन्दिराले के देखाइन यस्तो !
इन्दिराले के देखाइन यस्तो !
उध्रेको चोली छ है तै पनि लाईन्छ भन्दै नायिका सुष्मा कार्कीले आईटम नृत्य गर्दा धेरैले वाह्…वाह् भने । यो गीतले नाच्ने सुष्मा मत्र हैन, गाउने इन्दिरा जोशीलाई पनि खुवै चर्चा दियो । यसै त स्टेजमा कम्मर र नितम्ब मर्काउंदै नांचेर ठिटाहरुको नसा उतारिदिने इन्दिरा बुधबार काठमाण्डौंमा त्यसैगरि जवानी प्रर्दशन गरिन् ।
प्रायः स्टेज कार्यक्रममा पुग्दा इन्दिराको स्वरसँगसँगै उनको पहिरन र नृत्यले पनि दर्शकलाई आकषिर्त गर्छ । गीत गाउँदै गर्दा कम्मर मर्काउनु र त्यसैअनुसार पहिरन पहिरनु ईन्दिराको बिशेषता हो । कतिले त उनलाई नेपाली साकिरासमेत भन्छन् । काठमाण्डौमा वुधवार आयोजना गरीएको स्पोर्टस अवार्डमा पनि गायिका जोशीले जवानीको प्रर्दशन गरिन् । उध्रेको चोली र रातो घाँगर गीत गाएकी जोशीले दर्शकलाई ट्वाल्ल पारेकी थिइन् । ताली र हुटिङसँगै इन्दिराको बेग बढ्दो थियो